0 Saturday July 06, 2019 - 09:39:56
Maxkamadaha Islaamiga ah ee wilaayaatka Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose ayaa markale fuliyay xukunno daldalaad ah taas oo ka dhigaysa in sedax maalmood gudahood ay fuliyeen 14 xukun.
0 Saturday July 06, 2019 - 09:36:19
0 Thursday July 04, 2019 - 09:40:15
Idaacadda Islaamiga Alfurqaan ayaa dood uqabatay Wariyaal madax banaan ,doodda waxaa diiradda lagu saarayaa Luqadda Soomaaliga oo sanadadii dambe aad moodid in ay haadaan kusii dhacayso.
0 Thursday July 04, 2019 - 09:36:23
Michel Kabango oo ah Abaanduule katirsan ciidamada AMISOM ee duullaanka ku jooga dalka Soomaaliya ayaa meesha ka saaray suuragalnimada in ay guud ahaan dalka Soomaaliya ka tirtiraan awoodda Xarakada Al-Shabaab, isagoona sheegay inuusan isbaheysigoodu heysan awood ciidan iyo agab ku filan oo ay ku qabsan…
0 Wednesday July 03, 2019 - 09:43:25
0 Tuesday July 02, 2019 - 06:48:40
Waaliga wilaayada islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose Sheekh Muxamad Abuu Usaama oo meel munaasabad ah ka khudbeenayay ayaa soo hadal qaaday tacaddiyo kala duwan oo uu Mareykanku ka wado gobolka Shabeelaha Hoose.
Taliyihii Booliska Koonfurta Gaalkacyo oo dhaawac udhintay iyo Weerar ka dhacay Ceelasha Biyaha.
Sarkaalkii ugu sarreeyay ciidamada Booliska maamulka Galmudug ee magaalada Gaalkacyo ayaa udhintay dhaawac kasoo gaaray qarax shalay lala beegsaday gaarigiisa.
0 Sunday June 30, 2019 - 09:44:04
Sheekh Dr Caa'id alqarni oo kamid ah culimada ugu caansan wadanka Sacuudiga ayaa si lama filaan ah u sheegay in uu ka baxay Saxwada islaamiga ah uuna qaatay islaam uu ku sheegay qunyar socod lajaan qaadi kara caalamka.
0 Saturday June 29, 2019 - 09:18:44
0 Friday June 28, 2019 - 09:57:20
Mid kamida Jeneraalada Ugu Sarreeya Ciidamada Itoobiya oo Geeriyooday.
Dowladda Xabashida Itoobiya ayaa muddo laba isbuuc gudahood ah weysay labadii Jeneraal ee ugu sarreeyay ciidamada Melleteriga wadankaasi.
0 Thursday June 27, 2019 - 09:57:20
DAILY NATION: Al Shabaab Waa Halis Amni Oo Heysata Kenya.
0 Wednesday June 26, 2019 - 06:58:58
0 Wednesday June 26, 2019 - 06:31:32
Kulan dhawaan ka dhacay mid kamid ah xeryaha ciidamada shisheeye ee Shabeelaha Hoose islamarkaana dhex maray saraakiil ajaanib ah oo Afrikaan iyo caddaan isugu jira iyo kuwa Soomaali ah ayaa waxaa looga hadlay culeys ciidan la'aaneed oo ka jira degaanada ay heystaan ee gobolka.
0 Sunday June 23, 2019 - 07:35:29
Xaalad hubanti la'aan ah ayaa ka jirta wadanka Itoobiya saacado kadib markii uu ka dhacay isku day Inqilaab oo lagu doonayay in lagu xididda siibo mid kamida dowlad goboleedyada wadanka ugu awoodda badan.
0 Saturday June 22, 2019 - 07:35:29
Fahaah faahin dheeri ah ayaa kasoo baxaysa dagaallo culus iyo qarax maanta gobolka Baay lagula beegsaday ciidamo Itoobiyaan ah iyo maleeshiyaad katirsan maamulka isku magacaabay Koonfur galbeed.
Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay ka dhaceen mid kamdia gbollada ugu waaweyn wadanka Itoobiya ee dhaca bariga qaaradda Afrika.
0 Saturday June 15, 2019 - 08:15:46
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya xasuuq dad shacab ah xalay loogu geystay Koonfurta magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
0 Saturday June 15, 2019 - 08:12:38
0 Saturday June 15, 2019 - 07:58:42
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa markale weeraro khasaara badan lagu gaarsiiyay ciidamada dowladda Kenya ka fulisay gudaha dhulka Soomaalida NFD ee gummeysiga kujira.
0 Sunday June 09, 2019 - 12:13:17
0 Sunday June 09, 2019 - 11:23:39
Xiisado siyaasadeed ayaa ka jira gobolka Hiiraan maalin kadib markii uu hoggaamiyaha maamulka Hirshabelle shaqada Eryay Yuusuf Dabageed.
0 Wednesday April 24, 2019 - 11:14:03
0 Monday April 22, 2019 - 09:57:05
Wadanka Koonfur Africa waxaa ku nool Soomaali badan oo sanadihii lasoo dhaafay ku qul qulayay dalkaas, waxaana heysta dhibaatooyin kala duwan.
0 Sunday April 21, 2019 - 11:26:48